Waaxda Qorsheynta Maareynta Kobaca Ganacsiga Waaxda Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca|Shirarka Qorsheeyeyaasha Gobollada
The Warbixin Sanadeedka Madasha Qorsheeyaha 2018 hadda waa la heli karaa. Lix iyo toban kulan ayaa la qabtay, iyadoo tababaro la siinayo 437 kaqeybgalayaal.
Madasha Qorsheeyayaashu waxay siisaa fursad qaas ah - oo aan lacag laga qaadin - qorsheeyayaasha, guddiyada qorshaynta, saraakiisha la soo doortay iyo xubnaha bulshada si ay si aan rasmi ahayn ugala hadlaan arrimaha deegaanka, si ay fikradaha u wadaagaan ugana helaan casriyeynta hay'adaha gobolka iyo federaalka ee shaqadoodu saameyn ku yeelan karto isticmaalka dhulka. Kulamada Qorsheeyaashu sidoo kale waxay qancinayaan shuruudaha loogu talagalay qorsheeyeyaasha la aqoonsan yahay ee ku wajahan horumarinta xirfadeed iyada oo loo marayo bandhigyo heer sare ah oo ay bixiyeen xirfadlayaal isugu jira maadooyin qorshaysan oo waqtiyaysan oo ku habboon. Diiwaangelintu muhiim maahan tababarkan maalinlaha ah.
Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, Ururka Qorsheynta ee Washington iyo Waaxda Washington ee Ururka Qorsheynta Mareykanka ayaa si wada jir ah u soo bandhigaya Shirarka Goleyaasha Qorsheeyeyaasha. Waxaan ku sii wadaynaa qaab qaab ah oo loogu talagalay 2021 forumyada qorsheeyayaasha illaa ogeysiis mustaqbalka ah, waxaanna siineynaa ugu yaraan hal Madal oo gaagaaban bishiiba, oo leh mowduucyo isku dhafan oo daboolaya danaha gobolka iyo gobolka oo dhan. Ka eeg Jadwalka Madasha wixii macluumaad dheeraad ah.
Wixii hore Ajandayaasha iyo Xirmooyinka qoraalka waayo, forums fadlan eeg Shirarkii Qorshaynta Gobollada ee Soo Dhaafay qaybta hoose. Sanduuqa buluugga ah dhexdiisa, faylalku waxay ku yaalliin galka goleyaasha qorsheeyeyaasha ee gobol walba.
Dhamaan Qeybaha 'Qorsheeyeyaasha Diseembar'
Isniinta, Diseembar 7th, 9: 30-11: 00 am - Kulan Virtual
Mawduuc: Cusbooneysiinta Dacwadaha Guddiga Maareynta Kobaca, ajandaha oo leh diiwaangelin Zoom ah
Waxaa marti ku ah Jasiiradda
Isniinta, Febraayo 22nd, 1-5 pm - Kulan Virtual
Mawduuca: Guriyeynta, ajandaha oo leh diiwaangelin Zoom ah
Waxaa marti ku ah Bariga Washington
Arbaco, Janaayo 27th, 1-3: 30 pm– Kulan Virtual
Mawduucyada: Maaraynta Shrubsteppe, Nadaafadda Tamarta Nadiifka ah, iyo Qorshaha Gawaarida Firfircoon ee WSDOT, ajandaha oo leh diiwaangelin Zoom ah, Xiriirinta duubista golaha
Waxaa marti ku ah Qeybta Waqooyi Galbeed
Khamiis, Janaayo 7th, 9: 30-11am - Kulan Virtual
Mawduuc: Mashruuca Qaabdhismeedka Siyaasadda Kobaca, ajandaha oo leh diiwaangelin Zoom ah
Waxaa marti ku ah Qeybta Koonfur Galbeed
Arbaco, Diseembar 2, 9-11: 30 am - Kulan Virtual
Mawduuc: Anshax, ajandaha
Valerie Smith, Qorsheeye Sare
Gary Idleburg, Qorsheeye Sare
Koonfur Galbeed Washington
Matt Ojennus, Qorsheeye Sare
Ben Serr, Qorsheeye Sare
Shirarkii Qorshaynta Gobollada ee Soo Dhaafay
Fall 2020 Madasha Qorsheeyeyaasha Qaybta Koonfurta Cod ku saabsan Sinnaanta Qorshaynta - Isniinta, Sebtember 28, Ganacsiga iyo Qaybta Dhawaaqda Koonfurta ee APA-WA waxay qabteen kulan qorsheeyeyaasha fiidkii ee "Is-dhexgalka Sinnaanta Qorshaynta". Alex Brennan, Agaasimaha Fulinta ee Mustaqbalka, iyo Charles Patton, Maamulaha Sinnaanta ee Golaha Deegaanka ee Puget Sound, waxay bixiyeen macluumaad ku saabsan sida ururradooda ay wax uga qabanayaan sinnaanta iyo caddaaladda bey'adda shaqadooda qorshaynta.
Soo bandhigida Alex Brannan
Charles Patton soo bandhigid
Dhammaan kulammada kale ee Qorsheynta Gobollada ee la soo dhaafay waxaa laga heli karaa sanduuqa hoose.
WATCH VIDEO Bishii Luulyo 27, 2016, Kaqeybgalayaasha Madasha Qorshaynta Bariga Washington waxay u dabaaldegeen guul muhiim ah - dhacdadii 100-aad ee guuleysata ee E WA PF. Ka dib markii aan qirey shaqo badan iyo dadaal go'an oo ay soo bandhigeen liis wadaagayaal qorshaysan oo caan ah intii lagu jiray 26-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa na sharfay John de Graaf, oo ah qoraa ku guuleystay abaalmarinta, filim sameeyaha TV-ga dadweynaha iyo aftahan dhiirrigelin leh, oo dadka qorsheeyayaasha ah si xanaaq leh uga hadlay. qiimaha ay leedahay maalgalinta shaqsiyadeed iyo waqtiga bulshada, caafimaadka iyo farxada. Fiidiyow - Luulyo 27, 2016 Madasha Qorsheeyeyaasha Bariga Washington waxay u dabaaldegeysaa kal-fadhigeedii 100-aad.